29 Aug, 2014 - 09:08	 2014-08-28T16:18:40+00:00 2014-08-29T09:00:47+00:00 0 Views
Vanhukadzi huonoi mukana wekuti muhwine mibairo mikuru yakarohwa nechando mumakwikwi eKwayedza Africam Woman of the Year. Tumirai mifananidzo yenyu makapfeka mbatya dzezvipfeko zvemuAfrica (African attire) kuKwayedza, bepanhau revanhu, kuti muve nemukana wekuhwina mibairo inosanganisira zvitofu mazakwatira emari pamwe chete nemachira ekusonesa zvimwe zvipfeko. Mifananidzo iyi ngaiperekedzwe nefomu rinenge rachekwa kubva mu Kwayedza. Musakanganwe kupedzisa mutsara uri pafomu iri uye kuisa zita renyu, nhamba dzepamunogara pamwe chete nedzenhare. Zvakawanda nezvemakwikwi aya onai sekushambadzwa kwazvakaitwa pazasi. Mifananidzo inotumirwa ichaburitswa muKwayedza svondo rge-rega dakara tasvika pakuhwina kwemibairo gore rino. Madzimai pindai mumakwikwi aya muhwine!